Guddoomiyaha BFS Somaaliya Shariif Xasan sheikh Adan oo gaashaanka ku dhuftay in kulan sharuud ku xiran uu la yeesho Ra’iisal wasaare Geedi.
Buluugleey August 20, 2005
Kulan balaaran oo ay soo qabanqaabiyeen Dowladda Kenya iyo Qaramada Midoobey lana doonayay in maanta la isugu soo hor fariisiyo Magaalada Nairobi Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu guul dareystay ka dib markii fadhigaasi uu ka baaqsaday Gudoomiyaha Baarlamaanka dowlada KMG Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Shir Jaraa'id oo uu qabtay Markii uu fashilmay kulankaasi Ra'isulwasaare Cali Maxamed Geedi ayaa waxa uu sheegay in ay nasiib darro tahay waxa maanta dhacay, uuna dhiniciisa diyaar u yahay in lagu xaliyo waxii khilafaad ah wada hadal iyo is-afgarad.
Laakiin Guddoomiyaha Baarlamanka Fedraalka Soomaaliya Shariif Sheekh Adan ayaa isna mar uu la hadlay saxaafadda waxa uu u sharaxaad ka bixiyay sababta uu ugu baaqsaday kulanka Cali Maxamed Geedi, isagoona sheegay in uusan aqbali Karin ka qeyb galka kulan sharuud ku xiran, ayna dhinaca kale sina ku dhici doonin in uu ku raaco siyaasadda Profesor Geedi iyo Col. Cabdullahi Yusuf.
Profesor Cali Maxamed Geedi ayaa safarkiisii shalay kaga sii hormarey Col. Cabdullahi Yusuf magaaladda Nairobi, wuxuuna Porfasoorku ku dhega adeegay inuu la kulmo Guddomiyaha Barlamaanka Mudane Shariif Xasan inta uusan Col. Cabdullahi Yusuf imaanin. Inkasta oo Professor Geedi jeclaa inuu u kala dabqaado labada mas'uul hadane uma aynan suurtoobin. Taasna waxaa ugu wacneed Profesor Geedi oo inta uusan shirka billaban shuruud kaga dhigay in Guddomiyaha barlamaanka marka hore ku soo biro siyaasadiisa. Hasayeeshee, Shariif Xasan ayaa arrintaasi ku tilmaamay sharuud aan shaqeyn Karin, wxuuna Shariifka yiri, "waxa la isku heysto oo xubanaha dowladu ku kala qeybsanyihiin waxay tahay u hoggaansamida Axdiga Ku Meel Gaarka ah".
Dhinaca kale, Mr. Fransa Fall wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaruumaha Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaliya oo isna shir jaraa'id ka hadlay ayaa waxa uu xusay in inta uu khilaaf ka dhex jiro dowladda KMG aaney dhici karin in ciidamo nadad ilaalineed loo diro Soomaaliya, waxa uuna rajo ka muujiyay in Soomalidu ay heshiin doonaan labada dhinac ee dowladuna ay is-afgarad ku dhameyn doonaan waxyaabaha ay isku mari la'yihiin.
Fadhigii Maanta oo uu goob joog ka ahaa Profesor Geedi ayaa daqiiqado ka dib lagu kala dareeray waxuuna ergay gaarka ah ee Qaramda Midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr. Fall rajo uu ka muujiyay suurtogalnimada in kulan kale uu dhaco.
Ilo Muhiim ah ayaa waxa ay sheegeen in kulankan qaban qaabidiisa ay ka soo shaqeeyeen wasiirka Iskaashiga Gobolka Kenya John Arab Koch iyo Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qarumada Midoobey u qaabilsan arimaha Soomaaliya Fransawa Fall oo wada qiray inuu dhicisoobay qabsoomida kulankaasi .
Dhaqdhaqaaqa cusub ee dowladda Kenya ay isku soo dhoweyneyso dhinacyada dowladda KMG ah ee Soomaaliya oo khilaaf xagga fikirka ah uu u dhaxeeyo ayaa waxaa uu yimid xilli isku day ay sameeyeen dalalka Yemen, Jabuuti,Talyaaniga iyo Xafiiska Qaramda Midoobey ee Soomaaliya lagu guul dareystay sida horey loo shaaciyay.
Maxamed Amiin Sh. Cadow